Ahoana ny fampihenana ny tabataba sy fanatsarana ny famahana ny sary amin'ny fitaovana an-tserasera | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fomba hampihenana ny tabataba sy fanatsarana ny famahana ny sary amin'ny fitaovana an-tserasera
Elvis bucatariu | | Software, Tutorials
Hatramin'ny fahazazantsika dia nahita fika isan-karazany amin'ny sarimihetsika mifandraika amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny sary isika. Tsy mbola lavitra ny fomba fijery ara-teknolojia izahay, saingy misy fampiharana marobe amin'ny tranonkala ahafahanao mampitombo ny famahana ny sarinao.
Matetika izahay no mahita sary izay toa ratsy be. Betsaka amin'izy ireo no hita amin'ny Internet na nalaina taona maro lasa izay niaraka tamin'ny telefaona finday na fakantsary nomerika. Amin'ny ankabeazany, tsy misy antenaina ireto sary ireto ary tsy misy azo atao amin'izy ireo, na dia rehefa mandeha aza ny fotoana dia miseho ny fampiharana isan-karazany izay afaka manampy anao hanatsara ny hamafin'ireo sary ireo, sady mampihena ny tabataba.
Fanesorana ireo rindranasa mandroso kokoa toa ny Photoshop na Lightroomizay miasa hahagaga raha ny fanovana sary no resahina, misy ihany koa ny vahaolana maimaim-poana ho an'ny hetsika tsotra. Misy aza ny rindranasa amin'ny Internet izay afaka manampy anao hanatanteraka io asa io, indrindra raha te hampitombo ny famahana ny sarinao ianao.
Araka ny andrana nataoko, Waifu dia manana asa tena tsara misy valiny mahaliana, araka ny hita amin'ny sary napetrako etsy ambony.
Hita ao amin'ny ity adiresy ity, ity fitaovana an-tserasera ity dia tena mahomby, na dia misy fetrany manokana aza. Ohatra, azonao atao ny manitatra sary miaraka a 5MB max habe, ary azonao atao ny mampihena ny tabataba amin'ny sary a fehin-kevitra avo indrindra 3000 x 3000 teboka. Etsy ankilany, ny upscalling (scaling) dia azo atao hatramin'ny 1500 x 1500 teboka.
Toy izany koa, ny fizotran'ny fiakarana dia azo atao amin'ny taha 1.6x na 2x. Miaraka amin'ny hafainganana 2X, ny sary 640 x 304 teboka ary ny habe 300KB dia mety hahatratra ny refin'ny 1280 x 608 teboka sy 1.6MB.
Raha hampiasa ilay fampiharana dia tsy maintsy miditra amin'ilay rohy voalaza etsy ambony ianao, safidio ny sary amin'ny alàlan'ny bokotra "Misafidiana rakitra”, Zahao ilay boaty Photo raha sary izy ary safidio ny algorithm hampihenana ny tabataba mandeha ho azy. Nofidiko ilay algorithm natolotra, "medium", raha teo am-panaovana ny scaling function aho "2X”. Amin'ny faran'ny, kitiho ny Bokotra fampidinana mampidina ny sary vokar na miova hijerena ny sary farany eo am-baravarankely amin'ny tranokalanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Ahoana ny fomba hampihenana ny tabataba sy fanatsarana ny famahana ny sary amin'ny fitaovana an-tserasera
Netflix sy Spotify dia tokony hamarana ny fanakanana geo ao amin'ny Kontinanta Taloha
Nilaza i Amazon fa TSIA amin'ny fitehirizana rahona tsy voafetra